Rukanaapa (Wi-Fi yasimahla) - I-Airbnb
Rukanaapa (Wi-Fi yasimahla)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarjo
IRukanaapa yindawo epholileyo ekumgangatho osezantsi kwindlu yelog kwindawo edumileyo yaseLänsi-Ruka. Zonke iinkonzo zikaRuka, iivenkile, iindledlana, iilifti kunye neendlela zokuhamba ngekhephu zikufutshane.I-Rukanaapa yeyona ifanele izibini kunye neentsapho. Ifenitshala ye-sauna kunye nekhaya leholide iye yalungiswa nge-5/2021. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile.
Kukho iibhedi zabantu aba-4-5. Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, i-alcove inebhedi enebhedi kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala. Unokupheka ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye uphumle kwigumbi elipholileyo le-sauna.I-Wi-Fi yasimahla.
Ummandla 48 m2.
Izixhobo: i-dishwasher, i-microwave, i-hob yombane kunye ne-oven, ifriji, ikhabhathi yokomisa, i-Smart TV, i-CD / irediyo, i-toaster, ikofu kunye ne-kettle, i-hairdryer, umatshini wokuhlamba, i-iron kunye nebhodi yoku-ayina.Iplagi yokufudumeza imoto.
Izilwanyana ezifuywayo zivumelekile Ukutshaja imoto yombane kunye nokusebenzisa kakhulu kwiyadi ye-cottage akuvumelekanga.
-Intengiso-yentengiso iRuka, iAlko, isikhululo segesi, i-toboggan kunye ne-ski rental 1500 m ukuhamba
- Ski Bus stop 150 m
- Isikwere esisembindini sikaRuka kunye namathambeka 5 min drive
- Usuku lotshintsho lweveki ngoMgqibelo
- Izinto ezibonakalayo: I-Oulanka National Park, i-Jyrävä, iRukatunturi, iJuuma, iiNdlela zokuHamba iintaba (Karhunkierros, Pieni-Karhunkierros), Julma Ölkky, Riisitunturi njl.
I-Rukanaapa iyafumaneka kwiindwendwe ukusuka nge-16:00 ngosuku lokuhamba kude kube ngu-12:00 ngosuku lokuhamba, ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela ngexesha lokubhukisha.
Umbuki zindwendwe ngu- Marjo
Ndifumaneka ukusuka ngo-8am ukuya ku-9pm.